Inqaku leRedmi 7 Pro: Iinkcukacha, amaxabiso kunye nokuqaliswa | I-Androidsis
URedmi luphawu olutsha lukaXiaomi, oluboniswe njengophawu oluzimeleyo ngenyanga kaJanuwari. Ukusukela ngoko, basishiye ngezixhobo ezimbini, iNqaku 7 kunye URedmi Go. Nangona oko kwaboniswa eyokuqala, kwakusele kubhengeziwe ukuba imodeli entsha iza kufika kungekudala, into egqibeleleyo Ekugqibeleni le fowuni sele ihanjisiwe. YiNqaku leRedmi 7 Pro.
Le Redmi Qaphela i-7 Pro sisixhobo esiphakathi kwinqanaba, Inguqulelo ethe kratya ngakumbi yeRedmi 7 ethe ifemi yazisa ngoJanuwari. Ke sinobuchwephesha obungcono, kunye nexabiso elikhulu, njengesiqhelo uphawu.
Kule veki bekukho amarhe okuba intetho yakhe yayizakwenzeka phambi kokuphela kwenyanga. Amahemuhemu azalisekisiwe, kuba namhlanje, nge-28 kaFebruwari, esi sixhobo sitsha sophawu lwaseTshayina sisemthethweni. Ukucaciswa kwayo ngokupheleleyo kubonakalisiwe, ke siyazi ukuba silindele ntoni.
1 Ukucaciswa kweRedmi Qaphela i-7 Pro
Ukucaciswa kweRedmi Qaphela i-7 Pro
Kwinqanaba lobugcisa, le Redmi Qaphela i-7 Pro linyathelo elingaphezulu kwefowuni yokuqala thaca yinkampani. Imodeli ekuphakathi kwebala ekushiya uzive ulungile. Ukubheja kuyilo olunescreen esinotshi ekubunjweni kwethontsi lamanzi, ukongeza ekubeni nekhamera ngasemva kabini. Oku kukucaciswa kwayo:
Ukucaciswa kobuchwephesha kwiRedmi Qaphela i-7 Pro
Umzekelo Inqaku le-7 Pro
Isikrini I-LTPS Incell 6.3 intshi nge-FullHD + isisombululo se-2.340 x 1.080 pixels kunye ne-19.5: 9 ratio
Inkqubo Qualcomm Snapdragon 675
Ikhamera esemva 48 + 5 MP
Conectividad I-Bluetooth GPS WiFi 802.11 ac 4G / LTE ezimbini zeSIM
Ezinye izinto Inzwa yangasemva yeminwe yeminwe yokuvula i-IR Blaster
Ixabiso Ukusuka kwi-172 euro ukuyitshintsha
Iikhamera ziba yenye yamandla esi sixhobo. Njengemodeli yangaphambili yenkampani, iza ne-sensor ye-48 MP. Nangona kwimeko yale Redmi Qaphela i-7 Pro Inkampani ikhethe inzwa ye-Sony IMX 586. Ke linyathelo elingentla kwesenzi senqaku iRedmi Qaphela 7 ebenaso ngoJanuwari. Kananjalo enkosi kumqhubekekisi ngokutsiba kolu phuculo kumgangatho woluvo kunokwenzeka.
Kunye ne-MP ye-48 sensor sifumana i-5 MP yesibini sensor. Ikhamera enye isilindele ngaphambili kwifowuni, kule meko iyi-13 MP. Iza nezinto ezininzi ezongezelelekileyo, ezinje ngesiphumo se-portrait ye-AI ukongeza ekuvulekeni kobuso ngokufanayo. Ifowuni ikwasinika ithuba lokusebenzisa inzwa yeminwe, ethi kule meko ibekwe ngasemva kuyo.
Ngokuphathelele kumqhubekekisi, I-Snapdragon 675 isetyenzisiwe kule Redmi Qaphela i-7 Pro. Iprosesa ebhetele kunemodeli esisiseko eyaziswa ngoJanuwari. Ngale ndlela ivumela amandla amakhulu kunye nokusebenza okungcono. Ibhetri yenye inkalo apho ifemu ingakhange isindise nantoni na. Kuba bakhethe ibhetri enkulu yamandla, i-4.000 mAh. Ukongeza, le bhetri isebenzisa ukubiza ngokukhawuleza, njengoko inkampani iqinisekisile.
Ifowuni ibinenkcazo yayo e-India, apho sele isungulwe ngokusesikweni. Yeyona ntengiso yokuqala apho kunokwenzeka khona ukuba uthenge le ndawo iphakathi yoluhlu. Nangona ukuza kuthi ga ngoku akukho nto ithethwayo ngokusungulwa kwayo kwiimarike ezintsha. Kuya kufuneka iphehlelelwe e-China kungekudala, kodwa asinayo nayiphi na imihla. Asazi nto malunga nokuqaliswa okunokwenzeka eYurophu kwesi sixhobo, okwangoku.
Zimbini iinguqulelo zeRedmi Qaphela 7 Pro ethengiswa eIndiya. Amaxabiso nganye nganye ngala:
Inguqulelo ye4GB / 64GB inexabiso kwiRs 13.999 (1Iinguqu ezingama-72 zokutshintsha)
Imodeli ene-6GB / 128GB inexabiso kwi-Rs 16.999, emalunga nayo I-210 euro ukuyitshintsha
Siyathemba ukuba sinedatha kungekudala xa kusungulwa le Redmi Qaphela 7 Pro eYurophu. Ucinga ntoni malunga noluhlu olutsha lwephakathi lwentengiso?
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Xiaomi » Inqaku leRedmi 7 Pro yaziswa ngokusemthethweni
I-WhatsApp sele isebenza kukhangelo oluphambili ngezihluzi